DEG DEG: Golaha Shacabka oo cod aqlabiyad leh ku ansixiyey xukuumadda Rooble | Dusta News
Home > General > DEG DEG: Golaha Shacabka oo cod aqlabiyad leh ku ansixiyey xukuumadda Rooble
October 24, 2020 October 24, 2020 Dusta News57Leave a Comment on DEG DEG: Golaha Shacabka oo cod aqlabiyad leh ku ansixiyey xukuumadda Rooble
Xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa goor dhaw codkooda kalsoonida siiyey xukuumadda cusub ee ra’iisul wasaare Rooble uu soo dhisay dhawaan.
Ra’iisul wasaare Rooble ayaa golaha ka hor akhriyey barnaamijka shaqo ee hor yaalla xukuumadiisa waxuuna golaha ka dalbaday inay ansixiyaan xukuumaddiisa cusub.
Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa 19-kii bishan soo magacaabay golihiisa wasiirrada oo ka kooban 70-xunood oo kala ah wasiirro, wasiiru dowlayaal iyo wasiir ku xigeenno.
Shaqada ugu badan ee xukuumaddan hor taalla ayaa ah, qabashada doorashada dalka ee 2020/2021-ka oo waqtigeeda ku dhacda, sida uu balan qaaday ra’iiusl wasaare Rooble, markii uu baarlamaanka ka dalbanayey codkiisa kalsoonida.
QM oo ka hadashay warbixintii ay soo gudbiyeen Guddiga doorashooyinka qaranka Soomaaliya